Tiraanisformaroota gatii miiliyoona 3.6 baasan kanneen hatan to’annoo jala oolan - BBC News Afaan Oromoo
Tiraanisformaroota gatii miiliyoona 3.6 baasan kanneen hatan to’annoo jala oolan
Tajaajilli Elektirikii Itoophiyaa torban muraasa darban tiraanisformarri torba akka jalaa hataman ibse.
Tiraanisformaroonni kunneen haala qindaa'aa ta'een guyyaa keessa hatamuu isaanii Daarektarri Kominikeeshinii dhaabbatichaa Obbo Malaakuu Taayyee BBC'tti himaniiru.
Magaalaa Finfinnee bakkee kondominiyeemii Yakkaa Abbaadoo jedhamutti tiraanisformaroonni sagal hatamuu isaanii kan ibse immoo Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinneedha.
Itti gaafatamaan Kominikeeshinii poolisii Finfinnee Komaandar Faasikaaw Faantaa kanneen shakkiin to'annoo jala oolan keessaa tokko waggaa 12'f Tajaajila Eletirikii Itoophiyaa keessatti dafqaan bulaa ta'e hojjetaa ture akka tahe himan.
Saamichi Baankii Abisiniyaa saamtota harkatti fashalaa’e
Kaanimmoo shofeera tokko akkasumas nama muka ibsaa irra bahe nama hiikaa ture, walumaagala namoota sadii akka ta'e BBC'tti himaniiru.
Obbo Malaakuun yakki kuni ogeessotaan akka raawwate akka amanan himun kanneen to'annoo jala oolan keessaa tokko hojjetaa dhaabbata isaanii akka tahe mirkaneessaniiru.
Shakkamaan kunis guyyoota 15 dura shiboo hatun qabamee wabiidhaan gadhiifamu himaniiru.
Bakkeewwan yakki kuni itti raawwate Warra Ganuu, dallaa Bataskaana Maaramii Garjii keessaafi naannoo Gooroo akka ta'e himun yeroo ibsaan badetti ji'a tokko keessatti qofa Baha Finfinneetti saamamu kan himan.
Kanneen to'annoo jala oolan keessaa tokko yakkuma walfakkaataan himatamee dhimmi isaa mana murtiitti ilaalamaa osoo jiru sababuma kanaan hojiirraa kan ari'ame akka tahe kan himan immo Komaandar Faasikaawidha.
Shakkamtoonni qorannoorra akka jiraniifi eeruu ummataafi poolisiidhaan harkaaf harkatti qabamuu dubbatan.
Saamicha kanaafis konkolaataa kireenii kireeffachuun raawwatan kan jedhan Obbo Malaakun tiraanisformaricha akkuma jirun osoo hin taane keessaa shiboo maramaa akka fudhatan himan.
Shakkamtoonni kaan qoratamaa jiraachuu kan himan Komaandar Faasikaaw kanaan duras magaalaa Finfinnee keessa saamichi akkanaa darbee darbe akka raawwatu himaniiru.
Saamichi kunis guyyaa keessa uffata hojjetaa dhaabbata tajaajila elektirikii uffachuun akka raawwatu himun hawaasni naannoo shakkiidhaan poolisiitti himuu dubbatan.
Haatani maali ittin godhu, kan jedhu qoratamaa akka jirus dubbataniiru.
Gatiin giddugaleessaa tiraanisformara tokko qarshii kuma 400 kan jedhan Daarektarri Kominikeeshinii dhaabbatichaa kan qaalidha jedhameefi tokkon isaa gatii miiliyoona 2.5 baasu akka jirus himaniiru.
Qarshiin miil 5 ol Baankii Abisiniyaa Finfinneerraa saamamee ture qabame